Malunga nathi - Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd.
Iqonga kunye neMfundo
Ibhaso lezeNzululwazi neTekhnoloji
Inkqubo kunye neziQinisekiso
I-Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd.yishishini eliphambili kwezobuchwephesha eligxile ekufumaneni izithako ezisebenzayo kwizityalo zendalo, ikakhulu sikhulisa kwaye sivelise iindidi ezi-4 ezinkulu kubandakanya iimveliso ezingaphezu kwe-80.
Col Imibala yendalo
Extr Iziqholo zespice kunye neeoyile ezifanelekileyo
Ext Izicatshulwa zeZondlo kunye nezeMithi
Iioyile kunye neProteni
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kukutya, izinto zokuthambisa, ukubhaka, iziselo, ukhathalelo lwempilo kunye namashishini okutya.
Iimarike zethu eziphambili yiYurophu, iMelika, iAustralia neTshayina, iRussia, iJapan, iKorea namanye amazwe aseAsia naseAfrika.
Ishishini eliphambili lesizwe kwishishini lezolimo
Ibonakalise iShishini lokuQeqesha uKwakha kwiShishini elinye
Ishishini leSizwe eliPhezulu-ngobuGcisa
Ishishini lesizwe leDemo yeTekhnoloji
Ishishini leLizwe leTyala
Ishishini lesizwe leDemo yokuLima iiBhanti
Isicelo seBenchmark yeLungelo lokuShishino leShishini leSizwe leShishini
IZiko leTekhnoloji likaZwelonke
Isikhululo soPhando lwasemva kwesithuba
IChilli Inkqubo yokuLungiswa kweLebhu yeSebe lezoLimo
ILebhu Yobunjineli Yesizwe neYasekuhlaleni
Indawo yokusebenzela yabafundi
IZiko loPhando lePhondo lobuGcisa bobuNjineli
Itekhnoloji ephambili kunye noshishino lokutsala kunye nokwahlulahlula imveliso yendalo yeChilli
uzuze ibhaso lesibini leMbasa yeSizwe neTekhnoloji yeTekhnoloji ngo-2014
Ubugcisa obuPhambili obuSetyenzisiweyo kunye nokuSebenza kokuSebenza kweTumato
Kufunyenwe ibhaso lesibini leMbasa yeSizwe neTekhnoloji yeTekhnoloji ngo-2017
Inkqubo yokuvelisa kunye nezixhobo zophando kunye nophuhliso kunye nophuhliso lwepaprika oleoresin kunye ne-capsicum oleoresin
iphumelele ibhaso lokuqala leBhaso leNkqubela yezeNzululwazi neTekhnoloji kwiBhunga laseShayina lokuKhanya kuShishino ngo-2011.
Ukuphuhliswa kwetekhnoloji ephambili kunye nokusetyenziswa kwemveliso yendalo ye-lycopene
iphumelele ibhaso lokuqala lomanyano lweshishini lokukhanya lase China loyilo lobuchwephesha ngo-2012.
Itekhnoloji ephambili yokuyila izinto kunye noshishino lokusetyenziswa ngokubanzi kwecottonseed
waphumelela ibhaso lokuqala kwiphondo Hebei inzululwazi neteknoloji inkqubela ngo-2013
ICapsicum Enzulu yokuqhubekeka kolawulo lomgangatho woPhando lwezoBuchule kunye nezoShishino
iphumelele ibhaso elikhethekileyo lenkqubela phambili yesayensi kunye neetekhnoloji ngo-2013
Ibhaso lokuqala loLawulo lweShishini kuZwelonke Ukuphucula ukuPhumelela ngo-2012
Ibhaso loMgangatho kaRhulumente wePhondo le-Hebei ngo-2013
I-CCGB iqinisekiswe yi-BRC, cGMP, iLebhu yeSizwe (CNAS), ISO9001, ISO22000, ISO14001, OHSAS18001, KOSHER, HALAL, FAMI-QS, CMS, SEDEX, ukubhaliswa kwe-FDA yase-USA kunye nokuqinisekiswa kwenkqubo yolawulo lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Iimveliso zethu, ukuhlangabezana nesicelo se-FAO kunye ne-WHO, kwaye emva kweminyaka engaphezu kweshumi, i-ChenGuang ngokuthembela kumandla ayo iye yonyusa imeko ye-pigment yase-China emhlabeni, isenza i-China inkokheli yehlabathi kwimveliso ye-paprika oleoresin. Ukusuka kwinto ukuya kwinqanaba lehlabathi eliphambili, uChenguang uhlala ephucula.
I-CCGB iqhoboshela ukubaluleka komntu onesakhono. Okwangoku, i-ChenGuang Biotech ngoku ineengcali ezingaphezu kwe-100 ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya neengcali ezineSibonelelo esiKhethekileyo liBhunga likaRhulumente, iingcali zeProjekthi yeTalente yamakhulu / amawaka / amawaka alishumi, iiNgcali eziPhakamileyo zeNkqubo yePhondo 3/3/3, iiNgcali eziNcinci, abantu abanezidanga ze-PhD okanye ze-Master, kunye nezinye iingcali zobuchwephesha. Kubo bonke abasebenzi, inani lesidanga sokuqala okanye ngaphezulu kwe-akhawunti ngaphezulu kwe-44%.
Umbono wophuhliso lweCCGB: yakha izicatshulwa zendalo zehlabathi kunye negalelo kwimpilo yabantu!
Umgangatho obalaseleyo, ukukhokelela kwendalo! Inkampani ikulungele ukuthatha amandla kubo bonke abasebenzi, kunye nezinto zethu ezintsha, ukubhala amanqaku amatsha ukwenza igalelo elikhulu kuphuhliso loqoqosho lwentlalo kunye nempilo yabantu!
Bukela ividiyo ukuze ufunde ngakumbi ngathi
Izabelo, abathengi, abathengisi kunye namaqabane, abasebenzi kunye noluntu bonke baxhamla kuphuhliso lwenkampani kwaye bandise izibonelelo ezininzi. Kwangelo xesha, siya kugcina isantya kunye namaxesha kwaye siphumelele ngokubambisana.
I-Ccgb kunye nabasebenzi
I-Ccgb kunye nabaThengi / amaQabane
I-Ccgb kunye noMbutho
Inkampani inxulumene ngokusondeleyo nomdla obalulekileyo womqeshwa ngamnye. Abasebenzi basebenza ngokusebenzayo kungekuphela kuphuhliso lwenkampani, kodwa nakwikamva labo. Inkampani iyabahlonipha abasebenzi, ikhusela amalungelo neemfuno zabasebenzi, kwaye yakha iqonga elilungele ukukhula komqeshwa ngamnye. Inkqubo yenkqubela phambili yeshishini ikwayinkqubo yokuphuculwa kwabasebenzi!
Ngelixa kuphuhliswa, i-CCGB izabalazela ukugqwesa kwaye iyaqhubeka inikezela abathengi / amaqabane ngeemveliso ezigqithile kumgangatho. Ngenxa yabathengi / amaqabane, i-CCGB ibambelela kwintsebenziswano yokuphumelela kwaye ifezekisa uphuhliso oluqhelekileyo nolwanaphakade.
Ngenyathelo le "Ndlela enye yeNdlela enye"
I-CCGB iphendula ngokubonakalayo kumalinge esizwe kwaye iphumeze iqhinga le- “Agriculture Going Global”;
Imizi-mveliso esekwe eIndiya naseZambia ukuphuhlisa iziseko zokutyala;
Ukukhuthaza ngenkuthalo ukutshintshiselana ngoqoqosho, inkcubeko kunye netekhnoloji kunye nentsebenziswano;
Ukuncitshiswa kwendlala kunye novuselelo lwasemaphandleni
Njengeshishini eliphambili lesizwe kwimizi-mveliso yezolimo, i-CCGB idlala indima ephambili kwimiboniso;
KwiPhondo leXinjiang kunye ne-Hebei, i-CCGB ikhulisa isiseko sezityalo, ilungelelanise ubume bezolimo bengingqi, kwaye yonyusa ingeniso yamafama;
I-CCGB iqhuba amafama angama-300,000 ukuba andise umvuzo wawo phantse ngeebhiliyoni ezimbini ze-yuan ngonyaka;
I-CCGB ijolise kakhulu kuphuhliso lwemfundo;
Saseka "i-Chenguang Scholarship" kwaye samisela isiseko sokuguqula ukufundisa ukuxhasa abafundi abahluphekileyo;
Kule minyaka idlulileyo, iminikelo yethu kwezemfundo ifikelele ngaphezulu kwesigidi esinye seRMB.
Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo & Uqoqosho lweSetyhula
I-CCGB ixhalabile ngokusetyenziswa okubanzi kokukhuselwa kwendalo kunye nezixhobo;
I-CCGB ibambelele kuqoqosho olujikelezayo, isebenzisa lonke icandelo lesityalo ukwenza isicatshulwa sendalo.
Ngombono wentshayelelo kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji, siziqaphele iindleko "zero" ze-lycopene kunye nemveliso yokukhutshwa kwembewu yomdiliya;
Yakha iziseko zendalo zehlabathi, Igalelo kwimpilo yabantu!
Ukukhutshwa kwemveliso yendalo, ngokhuseleko, ukuba luhlaza kunye nempilo, ibe lishishini eliphumelelayo lokuphuma kwelanga.
Isiseko sezinto eziluhlaza esilungileyo, indawo ephucukileyo yophuhliso, isikali esikhulu, isibonelelo semveliso esinexabiso eliphantsi kunye nophando oluphezulu kunye nophuhliso, amandla olawulo olusemgangathweni sisiseko esiqinileyo sophuhliso lweCCGB.
Impumelelo ye-paprika oleoresin sisiqalo nje senkampani yethu. Ukulungiselela imeko entsha yobomi: ukubuyela kwindalo kwaye siqwalasele isondlo kunye nempilo, sichaze indlela yethu yokuphuhlisa - sisebenzisa i-biotechnology ukungena kumzi mveliso wezempilo kwaye sizinikele ukufaka igalelo kwimpilo yabantu.
"Amanyathelo amathathu" asakhulayo
Icandelo lezempilo elikhulu
Kuphuhliso lwexesha elizayo, ngoku sisebenza ekuhanjisweni kwezixhobo kwiNyathelo lesi-3 lendlela yethu: 1'st Inyathelo, imibala yendalo; Inyathelo lesi-2, landisela ezinye izithako ezisebenzayo zokukhupha izityalo; kwaye ngokusekwe kwezi zinto ziluncedo, inyathelo le-3'rd yeemveliso zesondlo kunye nemveliso yamayeza amaTshayina, isiya kwicandelo lezempilo elikhulu.
Ngokusekwe kumgangatho ophezulu wezinto ezisetyenziswayo kwimveliso yendalo, i-CCGB yandisa inqanaba lezemveliso kwaye idibanisa ukusebenza kwezicatshulwa zezityalo ukuphuhlisa iimveliso zokhathalelo lwempilo; Sidibanisa ngokufanelekileyo itekhnoloji yokutsalwa kwezityalo kunye nethiyori yemveli yamaTshayina ukuphucula le mveliso yokutsala amayeza amaTshayina kunye nokwakha iimveliso zokhathalelo lwempilo ekhaya, isiseko samashishini amayeza. Siyazibophelela ekwenzeni iimveliso zononophelo lwempilo, amayeza anokufikelelwa ngabantu.
Indalo yendalo kwimpilo yabantu
—— Umsebenzi weCCCC
Sisoloko sisebenzisa isayensi kunye netekhnoloji ephambili ukukhupha izinto ezifanelekileyo kunye nezinto ezivela kwiimveliso zendalo, kwaye sizise ukhuseleko ngakumbi kubomi babantu.
Sizimisele ukuphucula umgangatho wendalo wokutya kwethu kunye nokuhlangabezana neemfuno zempilo yabantu. Siyathemba ukukhusela impilo yabantu kunye nenkonzo ngokunyanisekileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni, ukwenza ubomi imibala kunye nolonwabo.
★Nyaniseka kwaye uthembekile, Sebenza nzima
★Ukukhuthala kunye nokuyila
★Ukuzinikezela, ukuthembeka kunye nokuziphatha
-—CCGB Enterprise Umoya